ဒူဒူကြီး: Control Valves (၂)
Linear movement valves အုပ်စုမှ၊ "Gate valves" တွေကို၊ throttling function အနေနဲ့ အသုံးပြုလို့မရသလို၊ valve cavitation ကြောင့်၊ flow pressure လျှော့ကျစေတတ်တာတွေအပြင်၊ rotary movement valves တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ဈေးနှုံးအရလည်း၊ ပိုတဲ့အတွက်၊ control valve အနေနဲ့၊ အသုံးမပြုကြတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ Rotary movement valves တွေကို၊ "Quarter-turn valves" တွေလို့လည်း၊ ခေါါကြပါတယ်။ Quarter-turn valves တွေဖြစ်တဲ့ plug valves, ball valves နဲ့ butterfly valves တွေကို၊ spindle မှ တဆင့် actuator နဲ့ ချိတ်ဆက်ကာ၊ control valve အနေနဲ့ အသုံးပြုပါတယ်။
Fig. Eccentric plug valve (shown inapartially open position)
"Eccentric plug valves" တွေမှာ၊ plug spindle မှတဆင့် horizontal အနေအထားနဲ့၊ actuator ကို၊ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ leverage closing force ကိုရစေဖို့၊ plug နဲ့ actuator ကြားမှာ linkages တွေ ထည့်သွင်းထားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် special petitioners တွေကိုလည်း၊ တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
Fig. Ball valve
"Ball valves" တွေကို၊ ရိုးရှင်းတဲ့ simple body form ပုံသဏ္ဍန်နဲ့တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ball valve မှာ၊ အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကတော့၊ sealing rings (၂) ခုကြားမှ spherical ball ဖြစ်ပါတယ်။ spherical ball မှာ fluid ဖြတ်သန်းသွားဖို့၊ အပေါက် hole ပါဝင်ပါတယ်။ spherical ball ဟာ၊ 90° rotating အနေနဲ့ လည်ပတ်ကာ၊ flow passage ကို အဖွင့် အပိတ်ဆောင်ရွက်ပေးပြီး၊ pressure drop အနေနဲ့ ပမာဏအနည်းငယ်သာ၊ ဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ Ball valves တွေဟာ၊ tight shut-off အနေနဲ့ ပိတ်နိုင်လို၊ fluid flow ကိုလည်း control လုပ်နိုင်ပါတယ်။ 250°C (38 bar g, saturated steam) အထက်၊ အပူချိန်ရှိတဲ့ fluids flow control application တွေမှာ၊ special seat materials ဒါမှမဟုတ် metal-to-metal seating တွေထည့်သွင်း တတ်ဆင်ထားတဲ့၊ ball valves တွေကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Butterfly valve
"Butterfly valves" တွေရဲ့ disc ဟာ trunnion bearings မှတဆင့်၊ rotating အနေနဲ့ လည်ပတ် ပါတယ်။ butterfly valve ရဲ့ open position မှာ၊ disc ဟာ၊ pipe wall နဲ့ အပြိုင် parallel ဖြစ်နေသလို၊ close position မှာတော့ perpendicular အနေနဲ့ ထောင့်မှန်ကျနေတာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။ butterfly valves တွေဟာ၊ tight shut-off အနေနဲ့ ပိတ်နိုင်လို၊ pressure drop အနေနဲ့ ပမာဏအနည်းငယ်သာ၊ ဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ ပုံမှန်တွေ့နေကျ butterfly valves တွေမှာတတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့၊ soft seats တွေကြောင့်၊ low pressure နဲ့ low temperatures application တွေမှာသာအသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပူချိန် မြင့်မားတဲ့ fluids flow control application တွေမှာတော့၊ metal-to-metal seats တတ်ဆင်ထားတဲ့၊ butterfly valves တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ limited turn-down ratio လိုအပ်တဲ့ fluid control application တွေနဲ့ အရွယ်အစား ကြီးမားတဲ့ main feed-lines တွေမှာ Standard butterfly valves တွေကို၊ တတ်ဆင်ထားတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
control valve တွေရဲ့ spindle ဟာ၊ valve body မှတဆင့် actuator နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့အတွက်၊ application ပေါါမူတည်ပြီး၊ spindle gland packing material အမျိုးအစားကို၊ မှန်ကန်စွာရေးချယ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ spindle gland packing တွေကို၊ stuffing box type packing, PTFE spring loaded chevron type packing နဲ့ bellow seal type packing ဆိုပြီး၊ တွေ့ရပါတယ်။ stuffing box type packing ဟာ PTFE spring loaded chevron type packing နဲ့ bellow seal type packing တွေ ထက်စာလျှင်၊ friction ပိုများပါတယ်။ spindle shaft မှာ friction များတဲ့အတွက်၊ control valve မှာလည်း actuator force ပိုမို လိုအပ်လာပါတယ်။
Fig. Gland packing
stuffing box type packing တွေကို၊ regular maintenance အနေနဲ့ ပုံမှန်လဲလှည်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ spring loaded packing တွေဟာ wear ဖြစ်သွားတဲ့အခါ၊ အလိုအလျှောက် re-adjust ပြန်လုပ်နိုင်တဲ့ အတွက်၊ regular maintenance အနေနဲ့ ပုံမှန်ဆောင်ပေးစရာမလိုသလို၊ bellow seal type packing ကတော့ friction ဖြစ်ပေါါမှုအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်၊ အကောင်းဆုံး stem sealing mechanism အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
spindle housing မှ bellow seal type packing sealing mechanism ရဲ့အပေါါမှာ၊ stuffing box type packing ကိုထပ်မံတတ်ဆင် ထားတဲ့၊ control valves တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ spindle မှတဆင့် atmosphere အတွင်းသို့၊ ယိုစိမ့်မှုမရှိစေရန်၊ ထပ်မံကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့၊ တတ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ bellow seal type packing ဟာ၊ stem sealing mechanism အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်သလို၊ အခြား seal type packing တွေနဲ့ ဈေးနှုံးအရနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်၊ ပိုများပါတယ်။
Fig. Guiding arrangements
control valves တွေရဲ့ body အတွင်းမှ valve plug ကို၊ spindle မှတဆင့် guide အနေနဲ့ ထိမ်းတဲ့အခါ၊ 'double guided' method နဲ့ 'guided plug' method တို့ကို အသုံးပြုပါတယ်။ 'double guided' method ဟာ အသုံးများတဲ့ method ဖြစ်ပြီး၊ spindle ရဲ့ ထိပ်ဖက်နဲ့ အောက်ဖက်တို့မှ၊ ထိမ်းပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ 'guided plug' method ကတော့၊ plug ကို cage သို့မဟုတ် frame မှတဆင့်၊ ထိမ်းပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ control valve တွေမှာ noise ကို၊ လျှော့ချဖို့အတွက် perforated plug ကို၊ valve plug နဲ့အတူ တွဲကာ တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ Two - port control valves တွေကို၊ low, medium နဲ့ high temperature liquid application တွေမှာတတ်ဆင်ကြပြီး၊ အသုံးအများဆုံး valve ကတော့ globe valve ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 04:26